My Chubby Princess - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga and Light Novel Online ကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ
အကြှနျုပျ၏ Chubby မင်းသမီး ပျမ်းမျှ 3.3 /5ထဲက 3
N / A, 5.7K အမြင်များရှိသည်
ပြဇါတ်, စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, သမိုင်း, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း
အင်္ဂလိပ် - ၂၁ ရာစုပါရမီရှင်ပါရမီရှင် Doctor နှင့် Assassin သည် Duke Residence ၏တတိယအလှမယ်သို့ရုတ်တရက်ပြောင်းရွှေ့သွားသော်လည်းနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားပြီးရုပ်ဆိုးသောအဆီလား? လူသိများသည်မှာသူမမျက်လုံးအေးစက်ဖွင့်လိုက်သည့်အခါတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသူမသည်သူမကိုလက်အောက်ခံသည်။ သူမသည်ဆိုးယုတ်သောမိန်းမနှင့် bastard ယောက်ျားအပေါ်သို့ခြေလှမ်း။ သူမသည်ထိပ်တန်းအဆင့်ဆင့်ဆင့်ခေါ်သူအဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးဘုရားသို့မဟုတ်နတ်ဆိုးဖြစ်စေလူတိုင်းကိုသူမတိုက်ခိုက်နေသည်။ သူမသည် bastards များနှင့်ဆက်ဆံရခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းတို့ကြောင့်သူမမျက်နှာနှစ်ဖက်ရှိuncleကရာဇ် ဦး လေးနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်ကိုသူမမသိခဲ့ပါ။ သူ့ထံသို့ဝင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်။ "ငါ့ကိုကယ်ပါ! ဒီချောမောပေမယ့်မျက်စိကန်းပြီးအဆုပ်ကိုင်နေသောဤလင်ယောက်ျားကိုပြန်ပို့ရန်ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုနိုင်ပါသလား။
အခန်းကြီး 33 ဧပြီလ 18, 2021
အခန်းကြီး 32 ဧပြီလ 10, 2021
အခန်းကြီး 31 ဧပြီလ 6, 2021
အခန်း 27 ဧပြီလ 3, 2021
အခန်း 26 မတ်လ 28, 2021
အခန်း 25 မတ်လ 28, 2021
အခန်း 24 မတ်လ 28, 2021
အခန်း 23 မတ်လ 28, 2021
အခန်းကြီး 22 မတ်လ 27, 2021
အခန်းကြီး 21 မတ်လ 17, 2021
အခန်းကြီး 19 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 18 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 17 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 16 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 15 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 14 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 13 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 12 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 11 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး9မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 8 မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး7မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး6မတ်လ 5, 2021
အခန်းကြီး 0.5 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 4, 2021
အခန်းကြီး0စက်တင်ဘာလ 19, 2020
သူ၏အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်း BABAY (ဘဏ္Theာတော်သည်perကရာဇ်မင်း၏ကောင်းကင်မှကျသည်)